Higgs boson: inona izany, toetra sy lanjany | Meteorolojia amin'ny tambajotra
Ny bosoa Higgs
Portillo Alemanina | 20/02/2021 11:52 | Ciencia
Ao amin'ny sampan'ny fizika kuantum, dia ezahina ny handinika ny rafitra niavian'ny haben'ny an'izao rehetra izao. Misaotra an'io fa azo atao ny mahita ny Higgs 'Boson. Sombiny fototra io izay heverin'ny mpahay siansa fa manana anjara toerana lehibe amin'ny fahalalana ny niandohan'izao rehetra izao. Ny fanamafisana ny fisian'izao rehetra izao dia iray amin'ireo tanjon'ny Large Hadron Collider. Izy io no mpandrehitra poti lehibe indrindra sy mahery indrindra eto an-tany.
Amin'ity lahatsoratra ity dia holazainay aminao ary inona ny boson'ny Higgs, inona ny toetrany ary ny maha-zava-dehibe izany.
1 Ny maha-zava-dehibe ny bosona Higgs
2 Fiasa mekanisma
4 Tombony ho an'ny fiaraha-monina
Ny maha-zava-dehibe ny bosona Higgs
Ny maha-zava-dehibe ny bosona Higgs dia izy irery ihany no singa afaka manazava ny niandohan'izao rehetra izao. Ny maodelin'ny fizika sombintsombiny dia mamaritra tsara ireo poti-potika rehetra ireo sy ny fifandraisan'izy ireo amin'ny tontolo manodidina azy ireo. Na izany aza, ampahany manan-danja sisa no hamafisina, izay no afaka manome valiny ho antsika momba ny niandohan'ny lamesa. Tsy maintsy raisina fa raha ny fisian'ny faobe an'izao rehetra izao dia niseho tamin'ny fomba hafa noho ilay fantatsika. Raha elektrôna tsy nanana faobe Tsy hisy ny atoma ary tsy hisy ny raharaha araka ny ahalalantsika azy. Raha betsaka dia tsy hisy simia, tsy misy biolojia ary tsy hisy ny zavamananaina.
Mba hanazavana ny maha-zava-dehibe an'izany rehetra izany, ny British Peter Higgs tamin'ny taona 60 dia nilaza fa misy ny rafitra fantatra amin'ny hoe Higgs field. Tahaka ny fotômôna izay singa fototra rehefa miresaka ny sahan'andriamby sy ny hazavana isika, ity saha ity dia mitaky ny fisian'ny sombintsombiny afaka mamorona azy. Eto no mitoetra ny maha-zava-dehibe an'io sombiny io satria izy no miandraikitra ny fampandehanana ny saha.
Izahay dia hanazava kely ny fomba fiasan'ny masinina Higgs. Izy io dia karazana fitohizam-bolo izay mivelatra amin'ny habaka rehetra ary misy bosoa Higgs tsy tambo isaina. Ny habetsaky ny sombintsombiny izay mety hiteraka fikorontanana amin'ity saha ity, noho izany dia azo atao ny mamintina izany ny sombintsombiny rehetra misy fikororohana lehibe kokoa amin'ity sehatra ity dia manana volabe kokoa.
Betsaka amintsika no tsy mahalala ny atao hoe bosona. Raha te hahafantatra bebe kokoa an'ireo hevitra rehetra somary sarotra kokoa ireo dia hamakafaka ny atao hoe bosona isika. Ny siran'ny subatomika dia mizara roa karazana: fermion sy bosons. Ireo voalohany ireo no miandraikitra ny famoronana ny raharaha. Ny raharaha fantatsika ankehitriny dia vita amin'ny fermion. Etsy ankilany, manana ny tratrany isika izay tompon'andraikitra amin'ny fitondrana ny hery na ny fifandraisana amin'ny raharaha eo amin'izy ireo. Izany hoe, rehefa afaka mifanerasera ny iray sy ny iray hafa, dia manome hery izy io ary mamaritra izany amin'ny tratrany.
Fantatsika fa ny singa ao amin'ny atôma dia elektrôna, protôna ary neutron. Ireo singa ao amin'ny ataoma ireo dia fermion, raha ny photon, gluon, ary ny bosons W sy Z dia tompon'andraikitra amin'ny hery elektromagnetika tsirairay avy. Tompon'andraikitra amin'ny hery nokleary mahery sy malemy koa izy ireo.
Ny bosona Higgs dia tsy ho tsikaritra mivantana. Ny anton'izany dia hoe rehefa miseho ny fisarahana dia saika eo no ho eo. Raha vantany vao mikororosy izy io, dia miteraka poti-javatra fototra hafa izay mahazatra antsika kokoa. Ka ny dian-tongotr'i Higgs boson ihany no hitantsika. Ireo sombin-javatra hafa izay azo tsikaritra ao amin'ny LHC. Ao anatin'ireo zana-tsokajy haingam-pandeha dia mifandona ny iray hafainganam-pandeha amin'ny hafainganam-pandeha tena manakaiky ny hafainganam-pandehan'ny hazavana. Amin'ity haingam-pandeha ity dia fantatsika fa misy ny fifandonana amin'ny teboka stratejika ary azo apetraka eo ireo mpitsikilo lehibe.
Rehefa mifandona ireo sombin-javatra ireo dia miteraka angovo. Arakaraka ny haavon'ny angovo vokarin'ny potika rehefa mifandona izy ireo, arakaraka ny habetsaky ny habetsahan'ny sombintsombiny vokatr'izany. Satria ny teôria napetrak'i Einstein dia tsy mametraka ny habeny, fa isan-karazany ny sanda azo atao, ilaina ny mpandefa angovo mahery vaika. Ity sehatry ny fizika ity dia faritany vaovao zahana. Ny fahasarotana hahafantarana sy hanontany momba ireo fifandonana sombintsombiny ireo dia zavatra tena lafo sy sarotra tanterahana. Na izany aza, ny tena tanjon'ireto akora haingam-pandeha ireto dia ny mahita ny boson'ny Higgs.
Ny valin'ny hoe hita ve ny Higgs boson dia voafaritra ao anaty statistika. Amin'ity tranga ity, ny fiviliana mahazatra dia manondro ny mety hisian'ny valim-panandramana sotroina tampoka fa tsy tena vokany. Noho izany dia mila manatratra ny lanjany lehibe kokoa amin'ny sanda statistika isika ary amin'izany dia mampitombo ny fahafaha-mandinika. Ataovy ao an-tsaina fa ireo fanandramana rehetra ireo dia mila mamakafaka antontan-kevitra marobe satria ny mpiorina zana-kazo dia miteraka fifandonana 300 tapitrisa isan-tsegondra. Amin'ireo fifandonana rehetra ireo dia sarotra be ny manao ny angon-drakitra vokatr'izany.
Tombony ho an'ny fiaraha-monina
Raha hita ny bosona Higgs amin'ny farany dia mety ho zava-mahaliana ho an'ny fiarahamonina izany. Ary io dia hanamarika ny fomba amin'ny famotopotorana ireo tranga ara-batana maro hafa toy ny natioran'ny maizina. Ny maizina dia fantatra fa manodidina ny 23% eo amin'izao rehetra izao, fa ny fananany kosa tsy fantatra. Fanamby ho an'ny fitsipi-pifehezana sy ny fanandramana miaraka amin'ny mpanafaingana ny sombiny.
Raha tsy hita ny bosoa Higgs dia hanery ny teôria iray hafa hamolavolana izany mba hanazavana ny fomba fahazoan'ny poti-pototra azy. Izany rehetra izany dia hitarika amin'ny fivoaran'ny andrana vaovao izay afaka manamarina na mandà io teôria vaovao io. Ataovy ao an-tsaina fa izany no fomba mety indrindra amin'ny siansa. Mila mitady zavatra tsy fantatra ianao ary manandrama mandra-pahitanao ny valiny.
Manantena aho fa amin'ity fampahalalana ity dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny bosoa Higgs sy ny mampiavaka azy ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Meteorolojia amin'ny tambajotra » Haitoetrandro » Ciencia » Ny bosoa Higgs
Onja mahery vaika